Health & Beauty Archives » Page 98 of 100 » Lifestyle Myanmar
by OMCTC January 6, 2016 April 5, 2017 06
သင့်ချွေးပေါက်တွေဟာ မှန်ဘီလူးအောက်ရောက်နေသလို ကျယ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေလား??? စိတ်မညစ်ပါနဲ့။ ချွေးပေါက်ကျဉ်းစေတဲ့ လွယ်ကူတဲ့နည်းလေးတွေရှိပါတယ်။ ချွေးပေါက်လေးတွေ ပြန်ကျဉ်းအောင်က အပေါ်က ချွေးပေါက်ကျယ်စေတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်း သတိထားရပါမယ်။ ပြီးတော့ ချွေးပေါက်လေးတွေ ကျဉ်းသွားအောင် လုပ်ဆောင်ရမှာတွေကို ပြောပြပေးမယ်နော်။ အသားအရေထိန်းသိမ်းမယ် —————————– အဆီပိုတွေနဲ့ ဆဲလ်သေတွေကြောင့် ချွေးပေါက်တွေပိုကျယ်လာစေပြီး ၀က်ခြံတွေလည်း ဖြစ်စေတော့ အသားအရေကို
ကျန်းမာသည့် လက်သည်း ဖြစ်စေရန်
မျက်စိဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ခံစားချက်အတွက် ပြတင်းပေါက် ဖြစ်နေသလို လက်သည်းဟာလည်း ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကြည့်ရူနိုင်တဲ့ မြင်ကွင်းပါ။ လက်သည်းအရောင်နဲ့ ပုံစံဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ရောင်ပြန်ဟပ်နေပါတယ်။ . ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ လက်တွေဟာ နေ့စဉ်ဘက်တီးရီးယားသန်းပေါင်းများစွာနဲ့ထိတွေ့နေကြရပြီး လက်သည်း အောက်ဘက်နေရာတွေဟာလည်း ဘက်တီးရီးယားတွေ ပေါက်ဖွားဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာတွေဖြစ်တာမို့ လက်သည်းကျန်းမာရေး ကောင်းအောင်
by OMCTC January 6, 2016 April 5, 2017 04
အားလပ်ရက်တွေ ပြီးဆုံးသွားပေမယ့် ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ဆောင်းရာသီလေးကို သစ်လွင်စွာ ခပ်တောက်တောက် အရောင်လေးတွေ၊ အပြောင်အလက်လေးတွေနဲ့ ဆက်လက်အလှဆင်ကြရအောင်နော်။ ဒီရာသီဟာ အပြောင်းအလက်လေးတွေနဲ့ အမိုက်စား ပြင်ဆင်ဖန်တီးဖို့ အကောင်းဆုံးရာသီပါပဲ။ သင့်ဖက်ရှင်အတွက်သာမက သင့်ဆံပင်အတွက်ပါ ဘယ်လိုပြင်ဆင်နိုင်သလဲဆိုတာ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ အရင်ကလို အရောင်တွေနဲ့ highlight သဘော ဆံပင်ကို ဆက်ပြီး
မုန်လာဥနီ စားသုံးခြင်းရဲ့ အကျိုးအာနိသင် ဆယ်မျိုး
၁။ မုန်လာဥနီ မှာ ကယ်လိုရီဓာတ်အနည်းငယ်သာပါဝင်တဲ့အတွက် ဝတဲ့လူ တွေနေ့စဉ်စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေတယ်။၂။ အစာအိမ် အစာချေအား ကောင်းမွန်တိုးတက်စေတယ်။ နှလုံး၊ အသည်း၊ တို့ရဲ့  လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အားကောင်းစေတယ် ။ ၃။ မုန်လာဥနီမှာ ဗီတာမင် E ပါဝင်တဲ့အတွက် ကင်ဆာဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ် ပေးတယ်။
သင့်ကို ဆေးရုံတက်ရတဲ့အထိ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ သင်မထင်ထားမိတဲ့ အရာများ
ကိုယ်တွေနေ့စဉ် ပြုလုပ်နေတဲ့ အရာတစ်ချို့ဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် တော်တော်လေးဆိုးရွားစေတယ်ဆိုတာ သတိပြုမိဖို့ ခဲယဉ်းတတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ ခဏခဏ နှာချေတတ်တဲ့သူဟာ နောက်ကျောရိုးတွေ နာကျင်စေတဲ့အပြင် ခြေတွေ လက်တွေ လှုပ်ရှားဖို့အတွက် ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ အကြောတွေထိတောင် ဒဏ်ဖြစ်စေနိုင်တာပါ။ ဒီလိုမျိုး ဘာမဟုတ်တာလေးလို့ ကိုယ်ထင်မြင်နေတဲ့ အရာတစ်ချို့ဟာ သင့်ကို ဆေးရုံး၊ ဆေးခန်းရောက်စေတဲ့အထိ
Lactobacillus Acidophilus လိုမျိုး သက်ရှိပိုးမွှားတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား တွေဖြစ်ပြီး အစာခြေ စနစ်ကို ကောင်းမွန်စေတဲ့ အပြင် ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာရေး အတွက်ပါ ကောင်းမွန်ပါတယ်။ Probiotic ခေါ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားတွေ ပါဝင်တဲ့ဒိန်ချဉ် Cheese ကိုစားပြီး မီဆိုဟင်းချို သောက်ခြင်းဖြင့်
by OMCTC January 4, 2016 April 5, 2017 04
နေ့စဉ် အစားအသောက်တွေထဲမှာ သဘာဝသစ်သီးတွေစားတဲ့ အလေ့အထလေးတစ်ခု ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သဘာဝ သစ်သီးတွေဟာ အသားအရေကို တဲ့အပြင် ကျန်းမာရေးအတွက်လဲများစွာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေတဲ့အတွက် အောက်ပါ အသီးလေးတွေရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။ ၁။ ငှက်ပျောသီး ငှက်ပျောသီးမှာ ဗီတာမင် အေ ၊ ဘီ နဲ့ ဗီတာမင်
by OMCTC January 4, 2016 April 5, 2017 03
ကျောရိုးအဆစ်ကြား အရွတ်ဝိုင်း နေရာလွဲသွားခြင်းကြောင့် ကျောရိုးဆစ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပွတ်တိုက်မိသောအခါ ခါးနာခြင်း (Back pain) ဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်။ ခါးနာခြင်းဟာ လူတစ်ဦးရဲ့လှုပ်ရှားသွားလာမှုကို ခံရခက်စေပြီး နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်သွားလျှင် ကုသရခက်ခဲစေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ခါးနာခြင်းဖြစ်ပေါ်မှုကို ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ အောက်ပါနည်းလမ်း ၆ ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ခါးကွေးပြီး မထိုင်ပါနဲ့။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးနီးပါး ကော်ဖီကြိုက်ကြပေမယ့် ကော်ဖီတစ်ခွက်ရအောင်ဖျော်ပေးရတဲ့ ကော်ဖီ ဖျော်စက်ကိုရော ဂရုတစိုက်ရှိကြရဲ့လား။ တကယ်တမ်းတော့ ကော်ဖီဖျော်စက်တွေဟာ သင်ထင်ထားတာ ထက်ပိုပြီး ဂရုတစိုက်ထားပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ စပိန်နိုင်ငံ၊ ဗလင်စီယာတက္ကသိုလ်က အဏုဇီဝပညာရှင်တစ်ဖွဲ့ ဟာ ကော်ဖီဖျော်စက်ကိုးခုကို ဓာတ်ခွဲလေ့လာ ကြည့်ခဲ့ရာမှာ အဆိုပါကော်ဖီဖျော်စက် ကိုးခုက ဆန်ကာစစ်တွေမှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးပေါင်း